Agaasimmaha guud ee hayadda socdaalka oo jagada iska casilay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Danielsson, agaasimaha guud hayadda socdaalka oo is casilay. sawir: Sawirle: Drago Prvulovic/TT
Agaasimmaha guud ee hayadda socdaalka oo jagada iska casilay
La cusbooneeyay fredag 16 september 2016 kl 11.06
La daabacay fredag 16 september 2016 kl 09.10
Agaasimaha guud ee hayadda socdaalka Anders Danielsson oo jagada iska casilay.
– Wakhti ma uu jiro mucayin ah oo ay tahay in shaqada la bedelan karo ama suurtagalkaasi uu yimaado. Midda aan ku qanac-sanahay waxay tahay in laga baxay caqabadii howlaha ee soo-galootiga, kolkii ay sannadkii hore soo galeen qaxooti aad u fara badan oo khalkhal abuurey iyo in hayadda socdaalku diyaar u tahay sidii ay u maareeyn lahayd howlaha noocaasi ah, sida uu qoraal saxaafadeed ku sheegay Danielsson.
Anders Danielsson ayaa laga bilaabo 1-da bisha diseembar la wareegi doona jagada agaasimaha guud ee hayadda lbisha Cas - Röda Korset.
Wasiirka socdaalka Morgan Johansson ayaa sheegay in aanay ka cajabin in Danielsson uu shaqada iska casilo maadaama uu horay ula socday, iyadoona iminka laga baxay caqabaddii wakaaladda la soo gudboonaatay, isla-markaana ay howshii wakaaladdu is-bedel uu ku dhacay.
Dawladda ayaa la filayaa in sida ugu dhakhsiyaha badan u magacawdo jagadaa ku sime inta laga magacaabayo agaasime guud. Anders Danielsson oo 62 jir ah ayaa horay u soo qabtay howlo ey ka mid yihiin agaasimaha guud ee hayadda nabad-sugidda Söpo iyo madaxa ciidanka ammaanka ee gobolka Skåne.